1) Asturnaanta Ilaalinta
Xaqiijinta sirta ah ee booqdayaasha stonesaudio.nl waa hawl muhiim noo ah. Taasi waa sababta aan ugu qeexno siyaasaddayada sirnimada macluumaadka aan ururino iyo sida aan u isticmaalno macluumaadkan.
Adigoo isticmaalaya macluumaadka iyo adeegyada stonesaudio.nl, ma ku raacsan tahay siyaasadayada khaaska ah iyo shuruudaha aanu halkan ku soo darnay.
3) Si aad u weydiiso
Haddii aad rabto inaad hesho macluumaad dheeraad ah, ama aad hayso su'aalo ku saabsan siyaasadda sirnimada ee stonesaudio.nl iyo gaar ahaan stonesaudio.nl, waxaad nagala soo xidhiidhi kartaa info@stonesaudio.nl
4) La socodka dhaqanka martida
stonesaudio.nl waxay isticmaashaa farsamooyin kala duwan si ay ula socdaan cidda soo booqata mareegaha, sida uu u dhaqmo booqdahaan mareegaha iyo boggaga la booqday. Tani waa hab caadi ah oo loogu shaqeeyo mareegaha sababtoo ah waxay bixisaa macluumaad ka qaybqaata tayada khibrada isticmaalaha. Xogta waxaan, iyada oo loo marayo cookies, Is diwaangeli, waxa ku jira ciwaanka IP-ga, nooca browserka iyo boggaga la booqday.
Waxaan sidoo kale la soconaa halka ay booqdeyaashu marka hore booqdaan mareegaha iyo bogga ay ka baxaan. Waxaan u ilaalinaa macluumaadkan si qarsoodi ah oo kuma xirna macluumaadka kale ee gaarka ah, macluumaadka lagu dhajiyay mareegaha internetka.
5) Isticmaalka buskudka
stonesaudio.nl meelaha cookies la booqdayaasha. Waxaan tan u samaynaa si aan u ururino macluumaadka ku saabsan boggaga isticmaalayaashu booqdaan mareegahayaga, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.
Dhammaan dhinacyadani waxay leeyihiin siyaasad gaar ah oo u gaar ah waxayna u isticmaalaan siyaasaddan sirnimada isticmaalka shabakadooda iyo adeegyada la xidhiidha. Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan sida dhinacyadan ula macaamilaan sirta waxaa laga heli karaa mareegaha dhinacyadan.
9) Siyaasadda khaaska ah ee xayaysiiyayaasha/dhinaca saddexaad
Wixii macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan siyaasadda gaarka ah ee xayaysiiyayaashayada iyo dhinacyada saddexaad ee la xidhiidha website-kan, fadlan booqo shabakadaha dhinacyadan. stonesaudio.nl saamayn kuma yeelan karto kuukiiskan iyo siyaasada khaaska ah ee cookies-ka ay dhigaan qolo saddexaad. Kukiyadani waxay ka baxsan yihiin xadka siyaasadda sirnimada ee stonesaudio.nl.
10) Kukiyada DART ee Google
Isticmaalka Google ee buskudka DART, ogolaanaya xayaysiisyada in lagu muujiyo on our website. Intaa waxaa dheer, buskudkan waxa loo isticmaalaa in lagu muujiyo xayaysiisyada mareegaha kale. Waxaad dooran kartaa inaadan mar dambe isticmaalin kukiyada DART. Dat doet u door de volgende website te bezoeken: DART